Puntland oo Dowladda ku eedaysay dagaalka Gaalkacyo Dhagayso | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Puntland oo Dowladda ku eedaysay dagaalka Gaalkacyo Dhagayso
Puntland oo Dowladda ku eedaysay dagaalka Gaalkacyo Dhagayso
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Wali max’ed Cali Gaas, ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dagaalka ka soconaya Magaalada Gaalkacyo ee u dhexeeya Maamullada Galmudug iyo Puntland,kaas oo ku dhawaad saddex todobaad ka soconaya halkaasi.
C/Wali Gaas oo maanta ka soo laabtay Dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in Dagaalka Gaalkacyo laga leeyahay dano siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu baajiyo doorashada Soomaaliya ka dhaceysa.
Waxaa uu sheegay in Maamullada Puntland iyo Galmudug, aysan wadin dagaalka ee ay ka dambeyso Dowladda Federaalka ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dagaalka Gaalkacyo uu muujinayo sida aysan Dowladda diyaarka ugu ahayn nabad ka dhalata dalka,waxaa uu sidoo kale sheegay in midnimada iyo nabadda oo la dhibaateeyo aysan Puntland u dulqaadan karin.
Halkan ka dhagayso shirka jaraa’iid ee Gaas.
Previous articleDagaal 8 qof ku dhintay oo markale ka dhacay Gaalkacyo
Next articleMadaxwaynaha oo booqday goob ay wax ku bartaan 180 arday